Sanganisa Vhoketi, Coupon, uye Discount Code Mhinduro | Martech Zone
Makodhi ekuderedzwa inzira dzakanakisa dzekukwezva mushanyi wako kuti avhare. Kunyangwe iri yekutapudza yakawanda kana kungoendesa kwemahara, dhisikaundi inogona kuita mutsauko wese. Munguva yakapfuura, isu tinozvivakira isu pachedu tichishandisa barcode fonti uye tobva tavatevera kuemail kero. Zvaisave zvinonakidza… kunyanya kana iwe ukawedzera kuomarara kwekudzikunurwa kwakawanda, kugovana kodhi, nezvimwe. Pamusoro pezvo, mafonti akashanda zvakanyanya online, asi isu taifanira kuvaka mufananidzo wavo zvine simba kuitira email.
Vhoketi, kuderedzwa uye makodhi ekuponi anowanzo kushungurudzwa, saka chikuva chekutevera chakakosha. Masystem maviri akambokurukurwa munguva pfupi yadarika mu email forum Ndiri wa:
iVoucher - Voucher Yekushambadzira Platform
iVoucher inokutendera iwe kunyatso gadzirisa uye kuendesa yako yese voucher, coupon uye discount code kubva kune imwechete, yakamisikidzwa chikuva.
Gadzira maVocha - Vaka mavhoketi anokatyamadza otomatiki akagadzirirwa email, dandemutande, zvemagariro uye nharembozha vachishandisa yavo mushandisi interface.
Shambadza maVocha - Shambadza mavhavhari munzira dzakawanda panguva imwe chete kuti uwane kusvika kwakawanda.
Tora Dhata - Dhata rakatorwa kuburikidza nemapeji ekumisikidza ane maratidziro anotendera iwe kubata nyore hukama hwevatengi kubva mukati meplatform.
Nunura maVocha - Nunura mavhavha zvakachengeteka mune chaiyo-nguva, online uye muchitoro.
Reporting - Nzwisisika yekumhan'ara mashandiro zvinoreva kuti iwe unokwanisa kutora nekugadzirisa pese pese kutaurirana kwevatengi nemavocha ako.
Voucherify - Voucher Kushambadzira API
Kune avo vako vangade kugadzira mhinduro yakasimba uye voibatanidza mukati, Voucherify inopa yakasimba API kupinda, kuteedzera, uye kudzikunura coupon kodhi kubva kune chero sosi.
NeREST API yavo, makodhi anogona kuverengerwa mumawebhusaiti (mutengi-parutivi JS SDK, voucherify Checkout widget), nharembozha (Android neIOS SDKs), kana kumashure-kumagumo (PHP, Ruby, Node.js, Java SDKs, Node .js sampuro app) yeplatform yako. MaRobust SDKs ese aripo.
Dzvanya kuburikidza nekuratidzira kuri kurarama:
Wana REMAHARA 3 Mwedzi Muedzo weVoucherify!
Tags: APIcoupon apicoupon macodecoupon redemptionmakodhi ekuderedzamailchimp coupon kodhimailchimp kuderedzwa makodhiruregererokudzikinura vouchervoucher systemvocha
Jul 18, 2016 pa 4: 16 AM
Mhoro Douglas, ndatenda nekunyora isu. MarketingTech Blog vaverengi vanogona kuwana yakasarudzika kodhi kodhi yemwedzi mitatu yemahara kunyoreswa kweVoucherify pano http://redeem.voucherify.io/marketingtech